Vaovao - Fa maninona no fidinao ireo mombamomba ny alimina indostrialy ho an'ny fefy fanao?
Fanombanana ara-teknika haingana sy teny nalaina haingana. Tongasoa eto hanontany sy hifanakalo hevitra momba ny fizotrany.
Mombamomba ny aluminium
Momba ny alimina indostrialy
Mombamomba ny alim-by
Fitrandrahana alim-pito alentika
Mombamomba ny alimina LED
Mombamomba ny aluminium alim-baravarana
Chassis aluminium profile & Box akorany profil aluminium
Mombamomba ny aluminium fitaovana
Varavarana sy varavarankely firaka alimo
Rindrina ambain aluminium
Fitaovana firaka aliminioma
Tube fantsom-boribory alimina alimika alimina
Sombin-tsolika machining CNC
Fitaovana varahina tsy mahazatra
Fitaovana vy tsy mahazatra
Fitaovana vy tsy misy fangarony
Karazana ampahany amin'ny firaka aliminioma
Fandriana voninkazo aluminium
Maninona no mifidy profil profil aluminium ho an'ny fefy fanao?
Miaraka amin'ny fivoaran'ny The Times, maro ny mpamokatra fitaovana indostrialy no tia ny mitondra fitaovam-piaramanidina sy ny robot amin'ny fefy, milalao fitokana-monina azo antoka mba hiarovana ny fiasan'ny milina mahazatra sy ny fiarovana ny mpiasa. Ahoana ny alimina indostrialy ho an'ny fefy fanao? Tokony ho tsara! Ary tena tsara! Satria ny profil aluminium momba ny indostrialy dia manana fahatsapana maoderina, tsotra ihany koa izy ary mora ampiasaina, ary ny vokatra manohana dia mora mivondrona. Ankoatr'izay, ny profil aluminium dia manana ny asan'ny anti-harafesina sy ny anti-harafesina mora diovina. Ireto ambany ireto dia hampahafantarinay ny fefy mombamomba ny aliminioma, avelao izahay hahatakatra ireo fitaovana mifandraika amin'ny fefy profil aluminium ary ny fomba fanodinana, sns.
Ny tena fototr'ilay fefy alimina indostrialy dia matetika 4040 sy 4080. Matetika eo an-joron'ny tsanganana, eo an-tampony, ny teboka matanjaka dia toerana mahery hampiasana profil 4080. Ny mombamomba ny tsipika mahazatra dia efa-joro, ny vokatra vita dia mihombo amin'ny oksidia, malama ny faritra. Indrindra aorian'ny indostria 4.0, ny atrik'orinasa indostrialy maro kokoa dia mila fefy mombamomba ny aliminioma mba hiantohana ny fiarovana ireo atrikasa.
Ny fampiasana fanodinana fantsom-bozaka vita amin'ny alimina indostrialy dia tena mety, ny ampahan'ny fifandraisana dia ny fampitaovana manokana. Mila mandeha fotsiny isika araka ny sary namboarina teo aloha, loaka totofana ary tariby paompy, izay mety indrindra amin'ny fanangonana. Ny fanambanin'ny fefy koa dia tongotra manokana, izay azo amboarina na afindra. Mora indrindra ny mitambatra amin'ny kojakoja manokana.
Ho fanampin'izany, fifantenana fitaovana fanampiny vita amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny indostria, acrylic matetika, jiro miaro, tabilao mijanona ho flame, plexiglass sns. Ny mpanjifa hafa dia hisafidy takelaka mainty 40 by 40. Rehefa mampiasa ireto fitaovana fanampiana ireto dia mila ampidirinao ao anaty slot natokana ho an'ny profil fotsiny izy io, izay mety indrindra amin'ny fifandraisana tsy misy tohika.
Fotoana fandefasana: Nov-02-2020